03 Mar, 2020 - 14:03	 2020-03-03T14:10:32+00:00 2020-03-03T14:10:32+00:00 0 Views
Ndiri murume ane makore 36, ndinotsvagawo mukadzi anoda zvokuroorwa ane makore 18 – 31 uye anotya Mwari. Handina mwana saka ndinoda asina. Anoda ngaandibate pa0772 435 715.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26 ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 24 anoda kunotorwa ropa. Ndinoshanda, handidi matsotsi. Nhamba yangu 0783 822 752.
Ndiri mukadzi ane makore 21, ndinotsvagawo murume ane makore 22 kusvika 30. Zvakawanda tinozotaura, ndobatika pa0774 221 904.
Ndinotenda nechirongwa chenyu. Ndiri murume ane makore 33, ndoda musikana ane makore 19 kusvika 26 ari HIV negative. Ndinoda asingashande, ini handishande uye vanoda mari sudurukai. Nhare yangu 0778 782 054.
Ndiri murume ane makore 37, ndinotsvagawo mukadzi anoda zvemba ane makore 25 – 35 ari pachokwadi uye asiri pamushonga. Nhare yangu 0776 167 148.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 30, ndinotsvagawo murume ane makore 32 – 40 ari pamushonga. Nhamba dzangu dzinoti 0771 500 667.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 45 nevana 2. Ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo murume ari pamushonga. Ngaave akafirwa seni, andifarira ngaandibate pa0772 424 362.
Ndiri mudzimai ane makore 40, ndinodawo murume ane makore 45 – 50. Ndiri paART, nhare yangu 0779 559 391.
Ndiri murume ane makore 34, ndinotsvagawo musikana kana mukadzi ane mwana 1. Nhamba dzangu 0771 747 558.
Makadii? Ndiri murume ane makore 45 nevana 4, ndodawo mukadzi ane makore 34 anoda zvemba. Ngaave nemwana 1 kana 2 anogara muHarare/Murewa ari pachokwadi kuti tironge imba izvezvi. Nhare yangu 0714 228 078, matsotsi kwete. Ndinoda asiri pamushonga.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 40, ndinotsvakawo murume anoda zvemba uye anomamata. Ndine mwana 1, handisi pamushonga asi matsotsi nevarume vevanhu kwete. Ndinonamata kumasowe, andifarira ngaandibate pa0713 775 630.
Ndiri murume ane makore 38, ndiri muHarare uye ndotsvaga mukadzi ari pachokwadi. Ngaandibate pa0719 074 247.
Makadii mhuri yeZimbabwe? Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvagawo mudzimai wekuwadzana naye ane makore 18 kusvika 20. Ndine vana 2, ndoda asina kana ane mwana mumwe. Zvizhinji totaura, andifarira ngaandibate pa0713 033 665. Ndatenda
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvakawo musikana wekuroora anoda zvemba uye asiri pamushonga. Ndoda anogara muKwekwe, andifarirawo ngaandibate pa0714 626 655.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume wemakore 40, handisi pamushonga uye ndotsvagawo mukadzi wekuwadzana naye. Ndinoda ane makore asingadarike 45, handidi mudhafu. Nhamba yangu 0719 816 286.
Makadii zvenyu? Ndiri murume ane makore 45, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 32 kusvika 37 ari pamushonga. Ndine vana 2, andifarira anondibata pa0775 290 687.
Ndiri murume ane makore 49, ndinotsvagwo mukadzi ane makore 35 – 45 ticha kana mupurisa ari muHarare. Nhare yangu 0772 949 626, WhatsApp chete.
Ndiri mukomana ane makore 29, ndodawo musikana ane makore 18 – 26. Ndiri teacher muHarare ndobatika pa0784 127 027.
Makadii henyu? Ndiri mukadzi ane makore 19, ndinotsvagawo murume ane makore 28 kusvika 29. Ndine mwana 1, ngaave ane vana vake. Zvakawanda tozotaura pa0786 043 352.
Ndiri murume ane makore 49 nemwana 1. Ndiri HIV negative uye ndotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 35 kusvika 45. Ndibatei pa0777 914 276.
Makadii hama nevadikani? Ndiri murume ane makore 37, handishandi uye pautano ndiri negative. Ndodawo mukadzi ava kuda zvemba asiri pamushonga. Nhare yangu 0719 062 317.
Ndiri murume ane makore 28 uye HIV negative. Ndinogara muHarare, ndiri kutsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore ari pakati pe18 – 23 ari HIV negative. Nhare yangu 0778 690 449.
Makadini? Ndanyorera ndanyorerazve ndishambadzeiwo, ndiri murume ane makore 49 nevanasikana vaviri vakura. Ndogara muHarare uye ndotsvagawo mudzimai wewanano. Ada ndibate pa0785 368 815 totaurirana zvizhinji asi kwete matsotsi nevari kutsvaga mari ndapota hangu.
Ndiri murume ane makore 34, handisati ndamboroora uye ndodawo mukadzi munaku asina mwana anoziva hupenyu hweparuzevha, kunyanya asingazezi basa. Zvakawanda tozotaura, andifarira anondibata nemasms chete pa0716 428 678.
Makadii? Ndiri mukadzi ari kutsvaka murume wekufambidzana naye anoda zvekuroora. Ndine vana 4, nhare yangu 0779 519 405.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 32, ndinotsvagawo murume ane makore 35 – 40 ari pachokwadi. Varume vevanhu kwete. Nhare yangu 0782 349 198.
Makadiko veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 22 ekuberekwa uye ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20 akavimbika. Ari pachokwadi anondibata pa0718 530 027.
VeKwayedza ndakambonyorera ndikangosangana nevanoda kutamba nechirongwa chino. Ndiri mukadzi ane makore 37, ndoda murume ane makore 45 – 55. Ndobatika pa0782 688 238.
Ndinodawo musikana ane makore 18 – 23 mupfupi akasimba uye ane magadziko. Ngaave ane hutano hwakanaka nekuti hwanguwo hwakanaka. Nhare yangu 0773 723 599.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 39, HIV positive uye ndodawo murume ari positive. Nhare yangu 0771 325 024.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 38 nevana 2 ndotsvagawo murume wekufambidzana naye ane makore 40 kusvika 45 asiri pamushonga. Nhamba dzenhare 0776 369 094.
Mhoroi. Ndiri kukumbira kuti musafona pa0718 851 216 ndakawanikwa kare. Ndinotenda veKwayedza.
Ndiri murume ane makore 46, ndinoda mukadzi anoshanda uye anonamata. Ini handishandi, nhamba dzangu 0782 458 488.
Makadii henyu? Ndiri mudzidzisi ane makore 30. Ndinotsvakawo musikana wokuroora ane makore 18 kusvika 25. Runhare rwangu 0775 751 037.
Ndinotsvaka mukadzi wekuroora ane makore 18 kusvika 25 asiri pamushonga. Anenge andifarira nhamba dzangu idzi 0787 743 757.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30, handina chirwere uye ndinotsvagawo mukadzi anonamata ane mwana 1 kana 2 ane makore 28 zvichidzika.
Pfambi nevanoda kutamba musafona, nhare yangu 0717 904 507.